Archive du 25-févr-2022
Fitondrana Rajoelina Be "scandale" indrindra tato anatin’ny 62 taona
Ity Fanjakana ity no fanjakana nisehoana toe-javatra mamohehitra na “scandale” betsaka indrindra tao anatin’ny 62 taona.
Loza izany nandalo teto amin’ny firenena tato anatin’ny 3 taona mahery izany ary isany heverina ireny rehetra ireny fa loharanon’ny tsy fahatomombanana rehetra misy eto amin’ity firenentsika ity hatramin’izao.
Clémence Raharinirina sy Lilie Rafaralahy “Tsy natao ho fitadiavam-bola ny mponin’Antananarivo”
Isan’ireo lohahevitra dinihina ao anatin’ny fivoriana tsy ara-potoanan’ny Mpanolontsaina Monisipalin’ny Kaominina Antananarivo ny momba ny SMGD (Société Municipale de Gestion Digitale) mitantana ny Parking sy ny resaka dosie.
Dany Rakotoson “Lasa mpanao asa soa ny mpitondra ”
Ny zava-miseho iainan’ny vahoaka Malagasy ankehitriny dia miainga amin’ny tranga any amin’ireo mpitondra ihany, hoy ny mpandinika raharaham-pirenena, Dany Rakotoson.
Tsy misangy ingahy ben’ny tanàna Harodana izay trano tsisy « Pérmis de construire »
Manangasanga any ny vinan’ny ben’ny tanànan’Antananarivo Naina Andriantsitohaina angatahana fankatoavan’ny Mpanolontsaina Monisipalin’ny tanàna mba handrodanana ireo trano rehetra tsy nahazo fahazoan-dàlana hanorina
KOHEN RIVOLALA “Ny olon-dRajoelina ihany no mety hanongana azy …”
Mandeha araka ny efa nambarako ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ankehitriny hoy ny Kohen Rivolala Filohan'ny Antoko politika CCDM raha naneho ny heviny momba ny fiainam-pirenena izy omaly.
Kaominina Andoharanofotsy Hahaleo tena ara-drano no tanjony
Ny rano fisotro madio no mbola tena olan’ireo fokontany 2 amin’ny 8 mandrafitra ny kaominina Andoharanofotsy, distrikan’Atsimondrano amin’izao raha araka ny fanazavan’ny Ben’ny tanàna Rakotoarimanana Henintsoa,
Fifidianana 2023 Miha mafy ny adihevitra momba ilay kandida faha 3
Hita ho miha mafy, hatramin’ny fiandohan’ity herinandro ity, ny adihevitra mikasika ny efa fisiana kandida goavana fahatelo amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona 2023.
Antananarivo Renivohitra Naverina nodinihina ilay hetran-trano mampikolay vahoaka
Miditra amin’ny fivoriana tsy ara-potoana faharoa amin’ity taona 2022 ny Filankevitra monisipalin’ny tanànan’Antananarivo nanomboka omaly.
Joseph Yoland “Tsy handroso isika raha tsy miova ny rafitra”
Mila jerena ny raikipohy hahazoan’ny firenena fiandrianam-pirenena marina, hoy ny mpitarika ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara ao amin’ny faritr’i Diana, Joseph Yoland.
Firenena mahantra Mampiroborobo ny mpaminany sandoka
Mirongatra izay tsy izy ireo karazan’olona misora-tena ho mpaminany sy mpahay fahagagana miseho amin’ny endriny maro.
Befandriana Avaratra Voasambotra ireo mpivarotra omby mampiahiahy
20 febroary lasa teo tokony ho tamin'ny 9 ora maraina no voasambotra tao an-tsena fivarotana omby antsoina hoe Sabotsibe Befandriana-Avaratra, i Monja sy Mihandry, izay samy mipetraka ao amin’ny Fokontany Manongarivo,
Dr Manitra Rakotoarivony “Mety hampikatona orinasa ny mpiasa 4 na 5 voan’ny Covid 19”
Mbola mahazo vahana tanteraka eto amintsika ny valan’aretina Covid 19 amin’izao. Miseho amin’ny endrika maro izy io, miankina amin’ny toe-batan’ilay olona toy ny sery sy ny gripa, ny kohoka,
Masoivohon’i Etazonia Hanampy ireo kaominina ao amin’ny IPAM
Fotoan-dehibe ho an’Ampitatafika ny andron’ny omaly Alakamisy 24 Febroary. Tonga nitsidika ny Ben’ny tanana Rado Ramparaoelina mantsy Rtoa Amy Hyatt masoivohon’i Etazonia miasa sy monina eto amintsika
Migrevy indray ny mpiasan’ny CTC-19 “Tsy misy asa eo raha tsy mivoaka ny karamanay”
Mifoha indray ny fitakian’ireo mpiasan’ny fahasalamana niasa tamin’ireo CTC-19 (Centre de Traitement Covid-19). Mpitsabo, mpitsabo mpanampy, mpitsabo misehatra amin’ny fitsaboana ny covid-19 noraisina ny aprily 2021
Fanamboarana tsy hita popoka Efa very fanantenana ireo mpampiasa lalana eny 67 ha
Azo lazaina ho efa very fanantenana ireo mpampiasa ny lalana eny 67 ha, raha ny mikasika ny fanamboarana ity lalana isan’ny be mpampiasa indrindra eto Antananarivo ity no asian-teny.
Fivorian’ny mpanolotsaina Tsy tonga nanatrika ny ben’ny tanàna
Manatanteraka fivoriana tsy ara-potoana faharoa ireo mpanolotsain’ny tanàna Antananarivo izay atao amin’ity taona 2022 ity. Fivoriana izay haharitra telo andro.
Mahajanga Mirongatra ny vaky trano isam-pokontany
Manomboka maraina vao mangiran-dratsy ireo jiolahy manao ny asa ratsiny io ary mampiasa fanafody fampatoriana mihitsy izy ireo rehefa mamaky trano raha ny fanadiadina nataon'ny polisim-pirenena ao Mahajanga.